Mpamatsy mpanamboatra volo mijidina volo mora vidy sy orinasa | YiZheng
ny Masinina mpanamboatra zezika mitsangana dia ny fampifangaroana sy ny fampitaovana ao anaty tsipika famokarana zezika. Izy io dia manana hery mampihetsi-po mahery, izay afaka mamaha ny olana toy ny adhesion sy ny agglomeration.
Inona ilay masinina mixeur vertical vertical?
Masinina mpanamboatra zezika mitsangana dia fitaovana fampifangaroana ilaina amin'ny famokarana zezika. Izy io dia mirakitra ny varingarina, ny endriny, ny môtô, ny reducer, ny rotary arm, ny spade, ny scraper, sns ..., ny motera sy ny transmite dia napetraka eo ambanin'ny silinder fampifangaroana. Ity milina ity dia mandray ny reducer amin'ny fanjaitra cycloid mba hitondra fiara mivantana, izay miantoka ny famokarana azo antoka.
Inona no ilana ilay milina mpanamory zezika mitsangana?
NY Masinina mpanamboatra zezika mitsangana ho toy ny fitaovana fampifangaroana tena ilaina amin'ny tsipika famokarana zezika. Mamaha ny olana fa sarotra ny mifehy ny habetsaky ny rano ampiana amin'ny fizotran'ny fampifangaroana, ary mamaha ihany koa ny olana fa mora ny manara-penitra sy manangona ny fitaovana noho ny hery kely mampihetsi-po an'ny mixer zezika ankapobeny.
Fampiharana ny Machine Mixer Vertical Vertical
Masinina mpanamboatra zezika mitsangana dia hampifangaro akora samihafa mba hahatratrarana ny tanjon'ny fampifangaroana fanamiana tanteraka.
Ny tombony azo avy amin'ny milina mpanamory zezika mitsangana
(1) Satria ny fiangonana cross-axis dia mifandray eo anelanelan'ny angady mampihetsiketsika sy ny sandry mihodina, ary ny tehina na ny visy dia namboarina mba hifehezana ny banga miasa amin'ny angady mampihetsi-po, ny fitrangan'ny fametahana fitaovana mafy dia azo esorina amin'ny ankapobeny mba hampihena fanoherana miasa sy akanjo.
(2) Ny zoro eo anelanelan'ny velarana miasa amin'ny angady mampihetsi-po sy ny làlan-kizorana amin'ny alàlan'ny torolàlana mitsivalana sy marindrano dia manjavozavo, izay afaka manatsara ny vokatra mampihetsi-po sy manatsara ny kalitaon'ny fifangaroana.
(3) Ny seranan-tsambo fanatontosana dia miorina amin'ny rindrin'ny barika. Ny barika dia afaka mikorisa mifanindran-dàlana mifandraika amin'ny talantalana, ary ny scraper dia azo hatsangana mba hanafainganana ny fandefasana azy sy amin'ny fomba feno kokoa.
(4) Tsotra sy mora hitazomana izany.
Fampisehoana horonantsary mpamokatra volo mitsangana mitsangana
Safidy maodely mifangaro volo mifangaro volo
Hafainganana amin'ny hazo
Asandrato ny hafainganam-pandehanan'ny hopper
Herin'ny motera mampihetsika
mprove ny herin'ny maotera
Ny haben'ny sombiny lehibe indrindra amin'ny agregate
Haben'ny endrika （HxWxH）
Ny lanjan'ny singa iray manontolo
Teo aloha: Mixeran'ny zezika BB
Manaraka: Masinina fanamainana varingarin'ny Rotary tokana amin'ny fanodinana zezika
Fampidirana Inona ny masinina fampifangaroana zezika marindrano? Ny Horizontal Fertilizer Mixer Machine dia manana tsipika afovoany miaraka amin'ny lelany misy zoro amin'ny fomba samihafa izay toy ny kofehy vy mifono manodidina ilay hazo, ary afaka mivezivezy amin'ny lalana samihafa amin'ny fotoana iray ihany, miantoka ny fifangaroana rehetra. Ny Horizonta-nay. ..
Fampidirana Inona no masinina Granulator Extrusion Granite Extrusion? Flat Machine Fertilizer Extrusion Granulator Machine dia natao ho an'ny karazana sy andiany samihafa. Ny milina granulator maty maty dia mampiasa endrika fampitana mivantana, izay mahatonga ny roller mihodina eo ambanin'ny asan'ny herin'ny friksi. Ny akora vovoka dia ...
Separator fisarahana ranoka matevina
Fampidirana Inona no atao hoe Screw Extrusion Solid-Liquid Separator? Ny Screw Extrusion Solid-Liquid Separator dia fitaovana fanodinana mekanika vaovao novokarina tamin'ny alàlan'ny firesahana ireo fitaovana fananganana dewatering efa mandroso ao an-trano sy any ivelany ary atambatra amin'ny traikefa momba ny R&D sy ny famokarana. Ny Screw Extrusion Solid-fluid Separato ...
Fampidirana Inona no masinina fanamoriana Pellets Pellets? Ny milina fanamainana Pellets Cooling Machine dia natao hampihenana ny fahalotoan'ny rivotra mangatsiaka sy hanatsarana ny tontolon'ny asa. Ny fampiasana ny milina cooler drum dia ny hanafohezana ny fizotry ny famokarana zezika. Ny fampifanarahana amin'ny masinina fanamainana dia afaka manatsara ny co ...
Fampidirana Inona ny masinina fonosana mandeha ho azy? Masinina fonosana ho an'ny zezika dia ampiasaina amin'ny famonosana pelora zezika, natao ho an'ny famonosana fitaovana be dia be. Anisan'izany ny karazana siny roa sosona sy ny karazana siny tokana. Ny masinina dia manana ny mampiavaka ny rafitra mirindra, fametrahana tsotra, mora hitazomana ary somary ...